WMFS, WMX, Onye kere windo, WindowLab na Xmonad: WM ndị ọzọ maka Linux | Site na Linux
Taa, anyị ga n'ihu nke iri na ikpeazụ na Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha ihe ndị ọzọ 5, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
N'ụzọ dị otu a, iji mezue nyocha a ma mechaa mara akụkụ ya dị mkpa, dịka, ha abụghị ma ọ bụ nọ n'ọrụ, que WM ụdị ha bu, gini bu nke ha njirimara bụ isima kedu ka esi etinye ha, n'etiti akụkụ ndị ọzọ.
1.3 Onye mepere windo
2 WM ndị ọzọ amaara
"A minimalist Tiling-type Window Manager mepụtara na Site Site ịcha ụdị".
Dika obu oru pere mpe na nke onwe, enweghi otutu ozi ndi ozo di ma ede ya na asusu C ma no n'okpuru ikikere BSD.
Ọ nyere ikike ịhazi bọtịnụ na ogwe aha aha na ụzọ mkpirisi keyboard. O dakọtara na ọkọlọtọ ICCCM na EWHM.
Enweghị ozi ọzọ dị iji kwado nbudata na ntinye.
"A Window Manager maka X. Dabere na WM2, n'ihi ya, ọ na-ejigide a yiri anya, ma na ndị dị otú ahụ n'ụzọ dị ka iji nye ihe ibuo ụgbọala maka atụmatụ ndị na-comfortably mpụga nke akporo nke mbụ wm2".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ikpeazụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 afọ gara aga.
Na-akwado ojiji nke mebere Desktọpụ na ojiji nke Menus.
Ọ na-enye njikwa windo zuru oke, ya bụ, Mepee, mechie, lekwasị anya, nkọwa, gbanwee, megharia, zoo, zoo ma pụta ọzọ.
Maka nbudata na ntinye ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, a na-enye njikọ ndị a: 1 njikọ y 2 njikọ.
Onye mepere windo
“Ihe X11 Window Manager nke emebere iji nye nkwado nkwado maka GNUstep Desktop Environment, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịrụ ọrụ n’adabereghị. N'ụzọ ọ bụla o kwere omume, ọ na-emepụtakwa ọmarịcha ọdịdị na mmetụta nke njirimara onye ọrụ NeXTSTEP. ".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ihe ikpeazụ n’ọrụ obere oge ọnwa anọ gara aga.
Ọ na-enye ọmarịcha nhazi ụdị windo njikwa na nkwado ihu ọma maka ụdị ịke.
Ọ dị ọkụ ma dịkwa ọsọ ọsọ, dị mfe iji, kwadebe nke ukwuu, ma nwee ikike ijikọ ụzọ mkpirisi keyboard na usoro omume dị iche iche.
Na-akwado ndenye menu dị ike, ngwa dockable (dockapps) na ojiji nke faịlị na-adị mfe ngwangwa ma jiri rụọ ọrụ.
"Onye Obere na mfe Window Manager nwere ọhụrụ imewe".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ karịa afọ 4 gara aga.
Ọ nwere iwu nke ịpị windo na-elekwasị anya, mana ọ bụghị bulie elekwasị anya maka ha.
Ọ na-enye usoro ịmegharị windo nke na-enye gị ohere ịgbanwe otu ma ọ bụ karịa ókèala nke windo n'otu arụ ọrụ, yana menu ọhụụ nke na-eketa otu akụkụ ihuenyo ahụ dị ka ogwe ọrụ.
Na-enye ohere pointer ka ejedebe na taskbar / menu iji mee ka ihe nchịkọta nhọrọ dị mfe iru.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha Ngwungwu "windowlab"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa.
“A ike ma tiling ịke X11 Window Manager e dere na ahazi na Haskell. Mgbe WM nkịtị, ọkara oge enwere ike iji dozie ma chọọ windo, Xmonad na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe site na ị na-arụ ọrụ ndị a".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ gbasara afọ 2 gara aga.
Ọ na-enye ụdị ejiji, ya bụ, enweghị windo windo, enweghị ọkwa ọ bụla, enweghị akara ngosi ụgbọ mmiri, naanị ahịrị dị ọcha na arụmọrụ. Na mgbakwunye, ọ kwụsiri ike ma dịkwa mfe ịhazi n'ihi usoro arụmọrụ ya dị mfe nke enyere na Haskell nke na-ekwe nkwa ahụmịhe na-enweghị ihe ọghọm.
O nwere nhazi a na-agbatị agbatị, n'ihi ọbá akwụkwọ na-adọrọ adọrọ nke ndọtị, gụnyere nkwado maka ihe ịchọ mma windo, Ogwe ọkwa, na ọdụ data akara ngosi.
Ọ na-arụ ọrụ dị oke egwu, n'ihi atụmatụ ya ndị bụ isi, dịka, ojiji nke oghere ihuenyo na ezigbo xinerama nkwado; na mgbakwunye na ikike ya iji rụọ ọrụ nkịtị nke idozi windo, ka onye ọrụ nwee ike itinye uche na ọrụ ndị ọzọ.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "xmonad"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
WM ndị ọzọ amaara
Ewezuga 50 Ndị nlekọta windo ekwuola na nyochaa, enwere ndi ozo kwesiri ka ekwuputa ya ka enwere ike ichoputa ma nyochaa mmasi nke onwe onye. N'ime ha, anyị ga-ekwupụta 50 ndị a:
5dwm: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Alloywm: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Amaterus: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Blanes 2000 (Ndị na -eso ụzọ): Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Ndị nne na nna: https://github.com/djmasde/catwm
Ike n'EziWeebụsaịtị: http://integrity.sourceforge.net/
Arslọ ọrụ: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Ugboro abụọ: https://github.com/segin/matwm2
Desktọpụ mmekọrịta MaXXhttps://docs.maxxinteractive.com/
Mgbu: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Olvwm / Olwm: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Oroborus: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Pawm: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Onye njikwa windo Tektronix (Tekwm): Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Tvtw: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Ndị ọzọ (Ultrix)https://pkgsrc.se/wm/uwm
Ọfọn: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Ugboro abụọ: Ọ dịghị ugbu a na ngalaba.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ WMFS, WMX, Onye kere windo, WindowLab na Xmonad, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WMFS, WMX, Onye kere windo, WindowLab na Xmonad: WM ndị ọzọ maka Linux